(Redirected from Nhevedzwa yemvura)
Nhevedzwa dzemvura chidzidzo chinotsanangudza mafambiro emvura pavhu, pasi pevhu uye mudenga munoumbwa makore. Mvura inosanduka kubva pakuva godo, mutuvi uye mupfunga panhambo dzakasiyana dzenhevedzwa dzemvura. Mvura inofamba munzvimbo dzakasiyana dzainoungana dzinoti: gungwa, nyanza, nzizi, mhepo. Izvi zvinoitika kuburikidza nezviitiko zvinoti: kunaya, kuyerera pavhu; kumimina nemuvhu; kusasauka ichienda mumhepo; kubundira mumakore; kuverereka kupinda mumhepo ichibva pamazinga echando; zvichingodaro.
Mvura iri mugungwa, nyanza, nenzizi inosasauka kupinda mumhepo kuburukidza nekupisa kwezuva. Kunyika dzinotonhora, mupfunga wemvura unoverereka (sublimation) kubva pasinowo , nemagodo (ice) chichipinda mumhepo. Michero inosaukaziya, izvi zvichireva mvura inobuda kubva pamuchero ichipinda mumhepo. Kusumuka kwemweya unopisa kubva padunhu kunosimudzawo mupfunga wemvura kuenda kumakore kunova kunotonhorera. Kutonhora kuri mudenga kunokonzera kuti chapfunga chemvura chibundire kuita madonhwe emvura anoumba makore. Mhepo iri mudenga inotakura mvura iya yabundira zvichiita kuti madonhwe akawanda emvura asangane nekuumbana kuita makore. Imwe mvura iri mumakore inoturuka kuburikidza nekunaya kwesinowo kana chivhuramahwe; iyi mvura inokwanisa kuchengetwa kwemakore iri sinowo kana magodo munzvimbo dzinotonhora. Imwe sinowo inonyauka mumwaka wekupisa. Mvura zhinji inoturuka, inonaya pamusoro pegungwa. Mvura inonaya padunhu inoyerera ichienda munzizi, nyanza, negungwa mainochengetedzwa. Kune chikamu chemvura inonaya padunhu chinopinda muvhu mainochenetedzwa tichizoinwa kubva mumatsime nezvibhorani. Imwe yemvura yepasi iyi inomimina nemuvhu ichinopinda pakaungana mvura munzizi, nyanza, negungwa; imwe mvura inotubuka ichibuda muvhu sechisipiti.
Tsananguro yemashoko [chinja]
Mvura Yemuvhu (Groundwater)- iyi imvura inosinina kupinda muvhu imwe ichigara muzvipakwa zvemvura (aquifers) zvinowanikwa pakati pehwendefa dzemabwe asingatendere mvura kupfuura. Imwe yemvura inoyerera nemuvhu inotubuka sezvisipiti imwe ichipedzesera yasinina nemuvhu kusvika kugungwa. Mvura inoyerera pamusoro nepasi pevhu inokonzerwa kudaro negunganidzo (gravity), uye nemutsindo (pressure) unosunda mvura kuti igadzikane iri muvhu .
Jezi (run-off in English) zvinoreva mvura inoyerera pamusoro pevhu mushure mokunge kwanaya.
Mhando dzekuturuka kwemvura [chinja]
Kuchengetedzwa kwemvura muZimbabwe [chinja]
Nhevedzwa dzeMvura muBhaibheri [chinja]
Retrieved from "http://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhevedzwa_dzeMvura&oldid=33245"	Category: Taranyika	Navigation menu
This page was last modified on 16 Kurume 2013, at 20:44.